Plugins WordPress tsara indrindra ho an'ny sehatry ny orinasa | Martech Zone
Plugins tsara indrindra ho an'ny tranokala WordPress Business
Wednesday, May 25, 2022 Alatsinainy, 27 Jona, 2022 Douglas Karr
Ny lazan'ny plugin WordPress sasany dia notarihin'ny fametrahana manokana na mifototra amin'ny mpanjifa. Ahoana ny momba ny raharaham-barotra? Nanangona lisitra ny anay izahay Plugins WordPress tianao indrindra izay inoanay fa ahafahan'ny mpampiasa orinasa mampiasa vola amin'ny atiny sy mitondra vokatra amin'ny alàlan'ny milina fikarohana sy media sosialy, amin'ny alàlan'ny finday, tablette na desktop… ary mampiditra tanteraka ny paikadin'izy ireo ara-tsosialy sy video.
Rehefa namolavola plugins WordPress malaza aho, dia mafana fo foana aho amin'ny fitadiavana sy fizarana plugins izay manao asa mahagaga hanatsarana, hanamafisana, ary hanamboatra asa ao anaty WordPress. Ny plugins WordPress dia sady fitahiana no ozona, na izany aza.
WordPress Plugin olana
Miala ny plugins indraindray lavaka fiarovana azon'ireo mpijirika atao ny manararaotra manosika malware hanaparitaka ny tranokalanao.
Matetika ny plugins dia tsy mampiasa ny Fitsipika momba ny kaody WordPress, manampy tsy ilaina kaody izay mety hiteraka olana hafa.
Plugins matetika tsy dia mandroso, ka miteraka olana anaty data na olana.
Plugins matetika tsy zaka, mamela anao fiankinan-doha amin'ny kaody mety lany daty ary hahatonga ny tranokalanao tsy hisy ilana azy.
Ny plugins dia afaka mamela taonina maro data ao amin'ny tahiry… Na dia aorinao aza ny plugin. Afaka manamboatra an'io ny mpamorona, fa matetika aza manahy izany.
Mino aho fa tena nisondrotra ny WordPress, lany daty ireo plugins taloha tsy hita tao amin'ny fitoeram-bokin'izy ireo ary avy eo nankato ny tanana ireo plugins vaovao mba hahazoana antoka fa tsy dia voasoratra ratsy izy ireo. Satria ny tranga WordPress nampiantrano anao dia mamela anao hametraka plugin, na izany aza, tsy maintsy manao ny enti-modinao ianao na mahazo loharanom-pahalalana azo antoka hametrahana tolo-kevitra.
Ankoatr'izay, maro amin'ireo Lisitra Plugins WordPress tsara indrindra dia mifanaraka amin'ny bilaogera manokana ary tsy tena mifantoka amin'ny orinasa sy ny ezaka manokana ataon'izy ireo amin'ny famolavolana sy famolavolana paikady votoaty manampy amin'ny fampiroboroboana ny orinasany. Ary koa, fantatsika rehetra izany tsara indrindra dia teny manara-penitra… noho izany dia handeha amin'ny ankafizinay izahay hanavahana ny soso-kevitray.
Ity ambany ity ny andiana efa voazaha toetra sy marina Plugins WordPress ho an'ny orinasa mino izahay fa ny tsara indrindra amin'ny tontolo plugins WordPress.
Plugin WordPress tsara indrindra ho an'ny Backups sy Fifindra-monina
WP Migrate - Misy plugins vitsivitsy tena tsara any ho any amin'ny fanaovana backup sy fifindra-monina mora, fa rehefa mila tena mahazo granular amin'ny rakitra, lohahevitra ary plugins hamerenana na hifindra monina ianao, ity plugin ity dia mihoatra ny andrasana. Ankoatra izany, afaka mamindra mora foana ny tranokala ianao - eny fa na dia ny fampidinana ny fahazoan-dàlana izay ahafahan'ny tranokala manosika na misintona amin'ny hafa.
Plugins WordPress tsara indrindra handraisana sy hanovana mpitsidika
EventON - Raha mitady hampiditra hetsika mora foana ianao, ary fisoratana anarana amin'ny toerana maro ho an'ny orinasanao, ity plugin ity dia sady tohana tsara no manana endri-javatra maro.
hery misintona Forms - Fanamboarana endrika haingana sy mora miaraka amin'ny safidy fanamboarana isan-karazany mora ampidirina amin'ny serivisy antoko fahatelo toa ny PayPal, MailChimp, AWeber, ary ny hafa. Add-ons sy API dia misy ho an'ny fampiasa nohatsaraina. Raha mampiasa ianao Element Pro, tsy ilainao izany satria endri-javatra io ny Forms.
Manasongadina & Mizara - plugin hanasongadinana lahatsoratra sy fizarana azy amin'ny alàlan'ny Twitter sy Facebook ary serivisy hafa ao anatin'izany ny LinkedIn, Email, Xing, ary WhatsApp. Misy ihany koa ny sakana Gutenberg ao anatiny izay ahafahan'ny mpampiasa mampiasa anao Tsindrio hizara.
OptinMonster - Mamorona endrika opt-in mahasarika ny sain'ny olona hahatonga ny mpitsidika ho mpanjifa sy mpanjifa. Misafidiana amin'ny popup, bara fitsangantsanganana mitsingevana, slide-ins, sy ny hafa hamoronana endrika opt-in afaka 60 segondra fisaka.
Jetpack - Jetpack dia manohy mihatsara miaraka amin'ireo kinova maimaimpoana sy karama izay manitatra ny fahafaha-manaon'ny tranokalanao WordPress. Seho roa lehibe inoako fa ny fahaiza-mizara ara-tsosialy ary misoratra anarana amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny mailaka. Misy lafin-javatra hafa iray taonina anefa! Ny tena tsara indrindra, ity plugin ity dia novokarin'i Automattic mba hahafantaranao fa voasoratra sy voatazona hatrany amin'ny fenitra avo indrindra izy io.
WooCommerce - ny sehatra eCommerce malaza indrindra amin'ny fananganana fivarotana an-tserasera. Woocommerce dia tohanan'ny fanatsarana sy plugins iray taonina an'ny ekipa ao amin'ny Automattic, mpamolavola WordPress.
Plugins WordPress tsara indrindra hanatsarana ny fitantanana WordPress anao
Fikarohana tsara kokoa - misy fotoana ilanao mihazakazaka mitady / manolo amin'ny tahiry ho an'ny atiny, rohy, na fikirana hafa. Ity plugin ity dia safidy tsara hanaovana izany.
Disable Comments – Ny fanehoan-kevitra taloha dia nahazo tombony lehibe ho an'ny laharan'ny fikarohana sy ny fandraisana ireo mpitsidika ny tranokalanao; na izany aza, tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nanjary saika tsy voafehy ny fandefasana spam ary nifindra tany amin'ny fantsona media sosialy ny resaka. Ity plugin ity dia hanafoana ny endri-javatra rehetra mifandraika amin'ny fanehoan-kevitra ary hanaisotra ny fizarana fanehoan-kevitra tsy havoaka amin'ny tranokalanao. Azonao atao koa ny mamafa ny fanehoan-kevitra rehetra navoaka.
dika mitovy Post - raha toa ka mila manao duplicate ny atiny ianao, ity plugin ity dia manome fifehezana voafetra ny amin'izay anjara asa afaka mandika votoaty, inona ny singa adika, sy ny maro hafa.
Google Tag Manager ho an'ny WordPress - tantano ny script-nao fanampiny sy ny hetsika hafa avy amin'ny Google Tag Manager. Ity plugin ity dia miavaka amin'ny WordPress ary manolotra safidy iray taonina.
Lisitry ny sary asongadinao - manampy ny Featured Image tsanganana ao anaty lisitra admin sy lisitra pejy. Io dia ahafahan'ny mpitantana mahita izay lahatsoratra na pejy manana sary napetraka.
Fidirana Drafitra haingana - Mitantana drafitra marobe ve ianao? Raha izany no izy, ity plugin ity dia mametraka hitsin-dàlana lehibe ao amin'ny menio admin-nao izay hitondra anao mivantana amin'ireo drafitrao (ary koa haneho isa).
Kit'ny tranokala nataon'i Google - ny vahaolana tokana hampielezana, hitantana ary hahazo hevi-baovao avy amin'ireo fitaovana Google mpitsikera mba hahombiazan'ny tranonkala amin'ny tranonkala. Manome fomba fijery manankery sy vaovao avy amin'ny vokatra Google marobe mivantana eo amin'ny dashboard WordPress hahazoana fidirana mora, maimaim-poana izany rehetra izany.
Fidirana vonjimaika tsy misy tenimiafina – Misy fotoana tianao hanome lohahevitra na mpamorona plugin miaraka amin'ny fidirana vonjimaika amin'ny ohatra WordPress anao… saingy tsy afaka mandeha amin'ny fizotry ny fisoratana anarana sy hahazoana tenimiafina amin'ny mailaka ianao. Ity plugin ity dia manome rohy mivantana sy vonjimaika azon'izy ireo ampiasaina hidirana ao amin'ny tranokalanao hanampy anao. Azonao atao koa ny mametraka ny fotoana lany daty.
WP Mail Log - raha efa nanontany tena ianao hoe alefa na tsia ny mailakao amin'ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny PHP na SMTP, ny WP Mail Log dia plugin iray tena lehibe hanarahana ny fandefasana hafatrao ivelany.
WP ny Import - Fanangonana plugins tena mora azo amin'ny fanafarana sy fanondranana angona avy amin'ny rakitra XML sy CSV miditra sy mivoaka ao amin'ny WordPress ary plugins malaza maromaro.
Plugins WordPress tsara indrindra ho an'ny famolavolana sy fanitsiana
Fitaovana Text Rich Advanced ho an'ny Gutenberg – Raha mila fanaingoana fanampiny ianao ao amin'ny tonian-dahatsoratra Gutenberg default miaraka amin'ny WordPress, ao anatin'izany ny code, subscript, superscript, lahatsoratra an-tsoratra ary ny fanovana loko ambadika… ity plugin tsotra ity dia manome ny fahafaha-manao rehetra.
Element Pro - Ny tonian-dahatsoratra zanatany ho an'ny WordPress dia be no tadiavina ary mety hahasosotra azy. Elementor dia tonga tamin'ny taona niaraka tamin'ny tonian-dahatsoratra WYSIWYG mahafinaritra, endrika, fampidirana, layout, modely, ary safidy am-polony hafa miaraka amina plugins miaraka aminy hanitatra azy. Tsy azoko antoka fa hanangana tranokala tsy misy an'io aho!
Plugins WordPress tsara indrindra hanamafisana ny atiny sy ny tratrany
Sehatra manokana mandroso - Ataovy mora amin'ny mpitantana, mpanoratra ary tonian-dahatsoratra ny manamboatra ny tranokalanao amin'ny fanatsorana ny fitantanan'izy ireo. Ny ACF dia tsotra ampiharina ary azo ovainaina tanteraka. Vidio ny fanampiana fanampiny manana fahazoan-dàlana fanampiny ho an'ny endri-javatra tsy mampino.
ARVE Advanced Responsive Video Embedder - Ny horonan-tsary mipetaka dia mety ho nofy ratsy amin'ny fitazonana ny fandrindrana mandray andraikitra amin'ny tranokalanao. Ny WordPress teratany dia mampiditra sehatra am-polony nefa tsy manome antoka fa mamaly izy ireo.
Tsindry fizarana mora ara-tsosialy - Mamela anao hizara, hanara-maso ary hampitombo ny fifamoivoizana ara-tsosialy miaraka amin'ny famonoan-tena sy Analytics Toetoetra.
Easy SMTPTP - Ny fandefasana fampandrenesana WordPress, fanairana ary mailaka mandeha ho azy avy amin'ny mpamatsy fampiantranoana anao dia mangataka olana. Ny fampiasana SMTP handefasana mailaka amin'ny alàlan'ny mpanome tolotra omenao anao dia azo antoka kokoa ary hanana tombam-bidy betsaka kokoa ho azo. Manana lahatsoratra mampiseho ny fomba hananganana an'ity izahay Google or Microsoft.
Feedpress - Ny feedPress dia mitantana ny fanodinana fahana ary manavao ny sakafonao amin'ny fotoana tena izy isaky ny mamoaka lahatsoratra vaovao ianao.
OneSignal - fanerena finday, tosika web, mailaka ary hafatra ao anaty app. Mampandre ny mpamandrika isaky ny lahatsoratra navoaka.
Widget mpilalao Podcast Feed - Ity dia widget izay novolavolako manokana izay malaza be. Raha mampiantrano ny podcast anao any amin'ny toeran-kafa ianao dia azonao atao ny mampiditra ny fahana ary mampiditra ny podcast ao amin'ny sisin-tranonao na mampiasa kaody fohy ao anaty pejy na paositra. Mampiasa mpilalao audio HTML natoraly WordPress izy.
GTranslate - Ampiasao ity plugin sy serivisy ity mba handikana ny atiny ho anao sy hanatsara ny tranokalanao WordPress hahazoana ny fikarohana iraisam-pirenena.
Avoahy amin'ny Apple News - Ahafahanao avoaka ao amin'ny fantsonao Apple News ny atiny bilaogin'ny WordPress.
Vao haingana - Manampia widget amin'ny tongotrao miaraka amin'ny atiny farany farany mba hanomezana rohy anatiny sy fifamatorana. Ity plugin ity dia manana safidy firafitra famolavolana taonina.
Velomy ny Lahatsoratra taloha - Maninona no zarainao fotsiny ny atiny anao raha afaka mizara atiny mahafinaritra imbetsaka ianao… mitondra fiara ary mahatsapa ny fampiasam-bolanao?
Lahatsoratra malaza WordPress - Manampia widget amin'ny tongotrao miaraka amin'ny atiny malaza indrindra mba hitazomana hatrany ireo lahatsoratra sy pejy ireo. Ity plugin ity dia natsangan'ny mpanoratra iray vao haingana, ary manana modely namboarina efa vonona handeha ihany koa!
WP PDF - Ampidiro mora foana amin'ny PDF ny PDF namana-finday - ary sakano ny mpijery anao tsy hisintona na hanonta ireo rakitrao tany am-boalohany.
ProfilePress - WordPress amin'izao fotoana izao dia mamela anao hampiasa avatar manokana izay ampakarina amin'ny alàlan'ny Gravatar. WP User Avatar dia mamela anao hampiasa izay sary nakarina ao amin'ny Media Library anao ho toy ny avatar.
Plugins WordPress tsara indrindra hanatsarana ny tranokalanao WordPress
Kraken Image Optimizer - Manatsara ny sary sy ny sary kely amin'ny sidina, ahafahanao mampihena ny haben'ny sary sy ny fotoana fandefasana nefa tsy manary kalitao.
StackPath CDN - Makà fotoana haingana kokoa amin'ny famatrarana pejy, filaharana Google tsaratsara kokoa ary fiovam-po bebe kokoa amin'ny StackPath CDN. Tsotra ny fanomanana ary minitra vitsy monja.
WordPress SEO - Rank Math dia Plugin SEO maivana miaraka amin'ny famakafakana atiny amin'ny pejy, sitemap XML, sombin-javatra manan-karena, fanodinana, fanaraha-maso 404, ary endri-javatra iray taonina maro hafa. Ny kinova pro dia manana fanohanana mahatalanjona amin'ny sombin-javatra manan-karena, toerana marobe ary maro hafa. Ny tsara indrindra dia voasoratra tsara ilay kaody ary tsy mampihena ny tranokalanao toy ny plugins WordPress SEO hafa.
WP Rocket - Ataovy haingana ny enta-mavesatra WordPress amin'ny tsindry vitsivitsy. Izy io dia ekena ho toy ny plugin caching mahery indrindra avy amin'ny WordPress Experts.
Plugin WordPress tsara indrindra ho an'ny Cookie sy Compliance Data
Amin'ny maha orinasa anao dia mila manaraka ny lalàna iraisam-pirenena, federaly ary fanjakana mifehy ny fomba fitehirizana sy fitazonana ny angon-tsain'ny mpitsidika ianao Nampiasa ny Widget Jetpack ho an'ny alalana cookie aho, saingy matetika no mavesatra mihoatra ny indray mandeha ary tsy nanana safidy namboarina.
Fifanekena Cookie GDPR (Vonona CCPA) - Ny plugin GDPR Cookie Consent dia hanampy anao amin'ny fanajana ny tranokalanao GDPR (RGPD, DSVGO). Ho fanampin'ny fanarahana ity plugin GDPR WordPress ity dia manohana ny fanarahana cookie ihany koa mifanaraka amin'ny LGPD ao Brezila sy ny California Consumer Privacy Act (CCPA) izay lalàna navoakan'ny fanjakana hanatsarana ny zon'ny fiainana manokana sy ny fiarovana ny mpanjifa ho an'ny mponina ao California.
Plugins WordPress tsara indrindra hiarovana ny tranokalanao WordPress
Akismet - Plugin malaza indrindra an'ny WordPress, Akismet no mety ho fomba tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao hiarovana ny bilaoginao amin'ny resaka spam sy trackback. Aza apetraka fotsiny fa tatero ireo sotasota ireo!
VaultPress - Arovy ny atiny, ny lohahevitra, ny plugins ary ny fikandranao amin'ny alàlan'ny backup amin'ny fotoana tena izy sy ny famandrihana fiarovana mandeha ho azy.
Log hetsika WP - Ny plugin logiciel hetsika WordPress feno indrindra hitazomana ny firaketana ny fiovan'ny mpampiasa, hanamora ny famahana olana ary hamantatra ny fihetsika mampiahiahy mialoha mba hanakanana ireo hacks ratsy. Raha misoratra anarana ianao Jetpack Security or Jetpack Professional mahazo Log Activity feno ihany koa ianao.
Mila Plugins bebe kokoa?
Misy ny plugins tena tsara sy karama izay anohana tanteraka azy Themeforest izay tsy ho hitanao any an-kafa. Ny orinasan-dreny, Envato, dia manao asa lehibe amin'ny fiantohana ireo plugins ho tohana sy havaozina matetika.
Fampahafantarana: Mampiasa aho kaody afiliana mandritra ity lahatsoratra ity, azafady tohano ny famoahana ahy amin'ny alàlan'ny fikitihana sy fividianana azy ireo!
Tags: Akismetplugins tsara indrindratsara indrindra WordPress Pluginsbizina WordPress wordpressccpacdnfanarahana pluginpolitika cookieLahatsoratra navoakaplugins tianao indrindraplugins wordpress tianao indrindragdprtranokala googleGutenbergmpilalao podcastPubSubHubbubfidirana haingana amin'ny drafitralaharana matematikaredirectfanitsiana lahatsoratra manankarenastackpathplugin pluginsgadgetWordPresshazo fanaraha-maso wordpressplugin backup WordPresswordpress cdnplugin WordPress wordpressplugin plugin ecommerce wordpressWordPress plugin formplugins wordpressplugin WordPress podcast pluginplugin WordPress smtpplugin plugin fizarana ara-tsosialy wordpresswp balafomanga
TaskHuman: Sehatry ny fiofanana momba ny varotra nomerika tena izy
Janoary 5, 2015 amin'ny 11:21 PM
Lisitra tsara sy infografika. Toy ny mahazatra, misy ankafiziko taloha sy mahazatra ary vaovao sasany tsy maintsy hojereko! Misaotra ny fizarana.
Janoary 6, 2015 amin'ny 1:53 PM
Jun 28, 2015 ao amin'ny 11: 34 PM
Tsy haiko hoe ahoana no ilazanao fa azo vakina ny iray amin'ity pejy ity? Tsy maintsy nanakodia antsasa-midina aho mba hahazoana zavatra hovakiana ary avy eo dia tsy mendrika izany. Raha mihevitra ianao fa ny sisin'ny pejy 3/4 amin'ny bokotra miloko marevaka sy ny pop-up izay mahasosotra ahy dia varotra ara-barotra, dia very ianao. Sahirana aho nanoratra ity mba hizara zavatra aminareo, toy ny nataonareo tamiko. Ary izany dia ATAO amin'ny FANENJANA. Azo antoka fa mandeha haingana ny teknolojian'ny sekoly tranainy sy ny tranokala. Saingy azo antoka fa ny marketing dia mbola momba ny fananganana fifandraisana ara-barotra sy fanangonana vaovao momba ny mpifaninana aminao? Tsy hahagaga ahy raha jamba loko ny ankamaroan'ny mpamaky anao. Azo antoka fa handeha amin’izany aho.
Jun 29, 2015 ao amin'ny 12: 31 PM
Misaotra amin'ny fanehoan-kevitra, Steve. Izahay dia mamatsy ny atiny eto tsy misy vidiny ho anao ary ny isan'ny mpamaky anay dia nitombo avo roa heny nandritra ny taona maromaro. Mirona kokoa aho hanohy hiasa amin'ny fitarihan'ireo mpankafy anay, mpanao dokambarotra ary mpanohana anay. Mirary ny soa indrindra.
Jolay 9, 2015 amin'ny 9:48 PM
Salama Douglas! Bilaogy mahaliana anananao eto. Fanampiana lehibe. Misaotra.
Jolay 10, 2015 amin'ny 12:21 PM
Misaotra! Ary tonga soa ianao!